Iibso Koodh-Dheer-Dheer ah oo aan biyuhu lahayn Unisex - Rarain bilaash ah & Canshuur la'aan | WoopShop®
Stylish Unisex Biyo -xireen Hooded Roob Dheer
$ 40.99 qiimaha joogtada ah $ 61.99
Color ciidda cagaaran khaki khaki midabo badda buluug ah madow jaalaha ah buluug samada kafeega cagaaran pink cas eyga madow hillaac cas daruur huruud ah ubax buluug ah
ciidan cagaaran / XL ciidanka cagaaran / XXL khaki khafiif ah / L khaki khafiif / XL khaki khafiif / XXL ciidan cagaaran / L midab leh / XXL buluug badda / L badweynta buluugga / XL badweynta buluugga / XXL madow / L madow / XL madow / XXL hurdi / L hurdi / XL hurdi / XXL cirka buluug / L kafee / XXL cagaaran / L cagaaran / XL cagaaran / XXL guduud / XL guduud / XXL kafee / L kafee / XL cas / l cas / XL cas / casaan guduud / L eyga madow / XL eyga madow / XXL midab / L midab / XL hillaac cas / L hillaac cas / XL hillaac cas / XXL eyga madow / L daruur huruud ah / XXL ubax buluug / L ubax buluug / XL ubax buluug / XXL cirka buluugga ah / XL cirka buluugga ah / XXL daruur huruud ah / L daruur huruud ah / XL
Stylish Unisex Biyo -La'aanta Hooded Raincoat -dheer - ciidan cagaaran / XL gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Koodhka roobka/Surwaalka aan roobka lahayn/Roobka Roobka: Roobka Wear
Nambarka Tusaalaha: 2001
Qaabka Poncho: Dharka roobka ee qofka kelida ah
Waxqabadka Dibadda: Baaskiil
Jinsiga: Haweenka, Ragga, Unisex, Haweenka
Qalabka: Pongee. Biyo-mareenka, dib loo isticmaalo, si fudud u nadiif ah, oo engegan. Miisaan fudud ayaa si fudud u xirxira oo u qaada.
Naqshad: Hood leh xadhig, jibbaar, iyo jeebka xagga hore.
Marxalad: Beerta dulsaarka ee bannaanka, socodka, baaskiil wadida, kaamamka, iyo fuulitaanka. Dharkaaga ka ilaali roobka iyo biyaha.
Jaakad roobaadka waa heer sare. Waxaan ku fekerayay, waad ogtahay, ma jirto waddo lagu galo. Dhammaan SUV-yada waa la dhejiyay. Furnitura waxay ku fiican tahay rosemir quduuska ah m waxay qaadatay HL. In garbaha yakraz on jaakada. Dovzhina-nizhce Kolin.
Loo gatay barafka buuraha. Cabbirku wuxuu qaatay wax badan in lagu xidho guud ahaan barafka. Way fiicantahay Hadhow qoyso.
Roobku waa mid aad u fiican, tayo leh, ma qoyan roobka, cabbirkiisa 44 wuxuu qaatay L, dusha sare ee jaakada kaliya, si degdeg ah u bixinta, waxaan ku talinayaa.
Waxay u timid iyadoo jajaban, laakiin si fudud ayaan uga dhacay. Tolmo waxay u eg yihiin tayo)
Dhererka 172 cm, miisaanka 62 kg, cabbirku waa ku habboon yahay, daboolku wuxuu noqon karaa wax yar ka weyn, laakiin guud ahaan caadooyinka. Tayadu waa wanaagsan tahay, khadadka waa siman yihiin.